Kojakoja fanandramana Kaviara - Rova Caviar Madagascar
No Entanas in the cart.
« Ireo pitsopitsony rehetra mila arahina rehefa hihinana azy mba hahalafatra ny tsirony »
Ny tontolon’ny Rova Caviar amin’ny alalan’ireo karazana kojakoja miaraka aminy…
Ilàna fahaizana manokana ny fihinanana sy fankafizana ny caviar !
Ny tsara indrindra dia fitaovana vita amin’ny akorandriaka no ampiasaina hihinanana azy.
Mba tsy hampiova ny tsiro saropady sy sarobidin’ireo vatosoa vakana mainty amin’ny fampiasana vilia sy sotro vita amin’ny metaly na volafotsy, dia aleo misafidy fitaovana natoraly sy malefaka kokoa mba hitandroana ny tsiron’ireo voa mafilotra.
SOTRO VITA AMIN'NY AKORANDRIAKA
JOBO VITA AMIN'NY AKORANDRIAKA